नेपाल आज | भारतबाट नआउने भएपछी झन् आकासियो प्याजको भाउ !
भारतबाट नआउने भएपछी झन् आकासियो प्याजको भाउ !
काठमाडौँ , ‘प्याजको कति हो साहु जी ! आजसम्म १५० रुपियाँ हो तर भोलि कति पुग्छ थाहा छैन’ कीर्तिपुर चोकका तरकारी व्यापारी सन्तोष तामाङले मङ्गलबार बिहान प्याज किन्न आएका ग्रहाकलाई दिएको जवाफ हो यो ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक तेजेन्द्र पौडेल कालीमाटी बजारमा मङ्गलबार तीन टन मात्रै प्याज आएकाले बजारमा यसको अभाव देखिएको बताउँछन् ।
यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा सीता शर्माले लेख्नुभएको छ।